Afọ hydrological 2017 mechiri na mpe nke 15% | Netwọk Mgbasa Ozi
Afọ hydrological 2017 mechiri na mpe 15%
Spain nwere oke oke ọkọchị na ọbụlagodi afọ iri gara aga enwebeghị ụkpụrụ dị ala karịa mmiri ozuzo na ọkwa mmiri. Afọ a mmiri mpe mechiri 15% na-erughị afọ gara aga. A na-ahụta ya dị ka ezigbo oge akụrụngwa na Spain niile, ọ bụ afọ nke asatọ nwere oke mmiri ozuzo kemgbe 1981.
Dị ka anyị si mara, usoro mmiri na-emechi n'ọnwa Septemba ma dịka amụma ihu igwe si kwuo, mgbụsị akwụkwọ a ga-adị ọkụ ma kpọọ nkụ, obere mmiri ozuzo. Gịnị ka a ga-eme n'ụdị ụkọ mmiri ozuzo dị otú ahụ?
1 Akọrọ hydrological afọ
2 Mmiri na ụkọ mmiri
Akọrọ hydrological afọ
Oge a malitere n'October 2016 na otu ọnwa nke mmiri ozuzo dị n'okpuru ụkpụrụ nkịtị, wee gaa n'ihu na November mmiri. Na ngwụsị ọnwa Nọvemba, site na mmiri ozuzo mere, data mmiri ozuzo laghachiri na steeti ya. Otú ọ dị, data ndị a bụ n'ihi ngosipụta nke oke mmiri ozuzo ma ghara igbasa n'ime ọnwa.
Mana ọnụọgụgụ ahụ dara, n'agbanyeghị oke mmiri ozuzo edere na ndịda ọwụwa anyanwụ nke peninshula na agwaetiti Balearic n'oge ọnwa Disemba na Jenụwarị, Jenụwarị bụkwa ọnwa akọrọ na oke mmiri ozuzo na afọ mmiri na-aga n'ihu na-ebelata ihe ruru 18% dị ala karịa uru nkịtị na nkera nke abụọ nke Jenụwarị.
Ọnwa Febụwarị na Machị nọgidere na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-erughị ala, dị nso na data nkịtị, mana mgbe ọnwa ndị a gasịrị, oge opupu ihe ubi kpọrọ nkụ. Mmetụta mmiri dị n'okpuru uru nkịtị mgbe opupu ihe ubi bụ 13%.
N'oge okpomọkụ a, enwere ụkpụrụ ọdịda 7% karịa nkịtị. Mana ụkpụrụ ndị a akwụbeghị ụgwọ maka ụkọ mmiri, na-eru September ịbụ 12%.
Mmiri na ụkọ mmiri
Afọ mmiri - nke sitere na Ọktọba 1 ruo Septemba 30- emechila na nkezi 551 lita kwa square mita maka Spain dum, nke na-anọchite anya mpe 15% ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ nkịtị (lita 648 kwa mita mita).
Nke a mere ka afọ a kpọrọ nkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọchịchọ maka mmiri na-anọgide na-abụ otu ma ọ bụ karịa, ya mere, ọ dị obere ma dị ntakịrị mmiri dị.
Mmiri bara ezigbo uru ma anyị ga-amụta iji lekọta ya ọnụ, ebe ọ bụ na anyị amaghị mgbe mmiri ga-ezo ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Afọ hydrological 2017 mechiri na mpe 15%
Septemba 2017 ka bụ ọnwa nke nnukwu ọdachi ndị na-emere onwe ha